Ku Cusub shineemooyinka Keliya - Christmas-ka ee la doortay: Rasuullada
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Ku Cusub shineemooyinka Keliya - Kirismaska ​​​​iyo kuwa la doortay: Rasuullada
Ku Cusub shineemooyinka Keliya - Kirismaska ​​​​iyo kuwa la doortay: Rasuullada
Daabacaadda ifafaalaha caalamiga ah ee The Chosen, CHRISTMAS oo leh kuwa la doortay: RASUULKA, oo ah kii ugu horreeyay ee lagu arko shaleemooyinka waddanka oo dhan iyada oo loo sii marayo Fathom Events, ayaa lagu sii iibinayay inta lagu guda jiro si toos ah Dallas Jenkins habeenkii Talaadada, waxayna burburisay diiwaanka iibka kahor ee loogu talagalay. qaybiyaha.
"Masiixiyadda kuwa la doortay: RASUULKU waxay jabiyeen rikoorka Fathom Events' iyagoo $1.5 milyan ku iibiyey 12-kii saac ee ugu horreeyay," ayuu yiri Ray Nutt, maamulaha Fathom Events. "Asal ahaan waxaa loo qorsheeyay in lagu daawado 1079 tiyaatar, waxaan horay u soo kordhinay 450+ goobood iyo kumanaan shaashad ah si aan u qancino baahida oo aan fileyno in tirooyinkani ay sii wadi doonaan inay koraan."
Waxaa lagu toogtay si qarsoodi ah, RASUULYADU waxay ku tusinaysaa dhalashada Masiixa indhaha Maryan iyo Yuusuf waxayna soo bandhigeen jilayaasha taxanaha la doortay.
Munaasabadda ayaa sidoo kale soo bandhigtay bandhig faneedyo iyo kooxo masiixiyiin ah oo aan caadi ahayn oo ay ku jiraan Phil Wickham, Maverick City Music, King iyo Country, Brandon Lake iyo qaar kaloo badan.
Dhacdadan ayaa ka dhacaysa tiyaatarada filimada laga bilaabo Disembar 1. Shaashado cusub iyo taariikho riwaayadeed ayaa lagu soo kordhinayaa si loo daboolo baahida, TheChosen.tv/Christmas ayaa heli doonta macluumaadkii ugu dambeeyay ee degaankaaga. Christmas-ka oo leh kuwa la doortay: RASUULKA waxaa lagu sii daayaa Dhacdooyinka Fathom.
"Markii aan go'aansanay inaan sameyno dhacdo Kirismas oo gaar ah, waxaan ogaanay inay noqon doonto xilliga ugu habboon ee tan laga heli karo shaashadda weyn," ayuu yiri abuuraha, Qoraa iyo Agaasime Dallas Jenkins. "Waa fursadii ugu horeysay ee taageerayaasha la doortay ay ku kulmaan dalka oo dhan, marka waxaan dooneynaa inaan ka dhigno mid qiimo leh. Iyo dhammaan fannaaniinta cajiibka ah ee la soo ururiyey, tani waa dhacdo ku habboon martiqaadka asxaabta."
Liiska hawl-wadeennada Christmas-ka oo ay la socdaan kuwa la doortay: RASUULIYADA hadda waxaa ka mid ah:
• Muusigga Magaalada Maverick
• Boqorka iyo Dalka
• Harada Brandon
• Hal Cod oo Carruur ah
• Bryan iyo Katie Torwalt
• Jilayaasha Jilayaasha la doortay oo qaadaya hal-ku-dhegyo:Austin Reed Alleman (Nathaniel) Giavani Cairo (Thaddeus) Luke Dimyan (Judas) Lara Silva (Eden)